Fanomezana vola any Namibia: Noteren'ny governemanta hangina ny vondrom-piarahamonina
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fanomezana vola any Namibia: Noteren'ny governemanta hangina ny vondrom-piarahamonina
Ny vondron'olona mihaza an'i Namibia izao dia noteren'ny governemanta azy hangina.
Ny Ministeran'ny tontolo iainana sy fizahan-tany (MET) ao amin'ny firenena dia namoaka fehezan-dalàna mandrara ny fandefasana biby maty hazaina ao amin'ny media sosialy. Ilay memoara dia niantso ny fampiharana ny fakana sary ireo mpihaza milanja amboara fa tsy ny fihazana tena "tsy etika", miteraka ahiahy momba ny inona marina no ezahin'ny governemanta Namibiana hafenina?
Inona marina no ezahin'ny governemanta Namibiana hafenina? D
Notohizan'ny fiampangana ny fanaovana kolikoly sy mpandraharaha tsy etika, rafitra mamela heloka ary fitadiavana fihantsiana antsoina hoe "biby manahirana" - ny vondron'olona mpihaza Namibia dia noteren'ny governemanta azy hangina.
Ny Ministeran'ny tontolo iainana sy fizahan-tany (MET) ao amin'ny firenena dia namoaka fehezan-dalàna mandrara ny fandefasana biby maty hazaina haino aman-jery sosialy. Ilay memoora dia miantso ny fampiharana ny fakana sary ireo mpihaza milanja amboara fa tsy ny fihazana tena "tsy etika", izay mampipoitra ahiahy ny amin'izay tena tadiavin'ny governemanta Namibiana hafenina.
"Hanala azy any amin'ny toeran-kafa fotsiny ny fialana amin'ny zon'olombelona mpihaza," hoy i Izak Smit avy amin'ny Desert Lions Human Relations Aid. "Fa kosa ny MET dia tokony hiantoka ny fandaminana sy ny fifehezana ny fihazana… ary hanadio ny indostrian'ny mpandraharaha tsy etika izay mikendry karazana zava-maniry tsy fahita firy dia ny elefanta sy ny liona any an'efitra," hoy ny fanazavany.
Na eo aza ny Fikambanan'ny mpikaroka matihanina namibianina (NAPHA) manohana ampahibemaso ny politika ary miantso ny mpikambana ao aminy hanao toy izany, ny fepetra takiana dia tsy nidina tamim-pahatokiana tamin'ny antoko roa tonta. Niaro ny zon'izy ireo hividy haza làlan'ny haino aman-jery sosialy ny mpomba ny haza haihaza, ary nilaza fa niankohoka tamin'ny mpanohitra mpihaza ny fanambarana, fa ny sasany kosa milaza fa mamela ny MET hanao famonoana liona sy bibidia miafina fotsiny izany. Araka ny NAPHA, “Tsy zakan'i Namibia ny fanoherana ny fihazana.”
Ny memoara dia mandrara manokana ireo mpihaza manana alalana manan-kery tsy handefa na handefa sary amin'ny sehatra ampahibemaso, amin'ny alàlan'ny fanaovana izany fahazoan-dàlana na izany aza. “Amin'izao fotoana izao dia mino izahay fa izao no zavatra tsara tokony hatao ary manantena izahay fa ny mpihaza sy ny safaris dia hanaraka an'io olana ara-pitondrantena io raha tsy misy ny fanohanana ara-dalàna. Izahay dia miantehitra amin'ny sitra-pon'ny tsirairay, ”hoy ny MET.
Ny MET dia nanandrana namoaka fihetsiketsehana mitovy amin'izany tamin'ny 2017 izay hampihatra ny fepetra fahazoan-dàlana mandrara ny marketing rehetra ny fihazana amboara amin'ny Internet. Na izany aza, notifirin'ny NAPHA izany satria nilaza izy ireo fa "manandanja ny orinasa toy izany".
Ny memoara dia tonga ao ambadiky ny valin'ny haino aman-jery sosialy taorian'ny namonoan'ny MET ny liona iray hafa namboarina tany an'efitra tato ho ato, ary koa ny fiampangana maromaro fa ny mpikambana ao amin'ny minisitera dia manangona vola avy amin'ny fihazana amboara. The famonoana ilay liona malaza, Gretzky, nahatonga antso an-tserasera niely tamin'ny ankabeazan'i Namibia ho toerana fizahan-tany. "Ny hoditra sy ny taolana ary ny claw koa toa nanjavona tamin'ny rivotra manify na dia ny mpiasan'ny MET aza no niatrika izany," hoy i Smith.
Jones Miverina ao amin'ny News in Hawaii: Anisan'izany ny fizahan-tany
Fisarihana mpizahatany eto Samoa: Fetin'ny Teuila any Samoa